Spotify inogadzirisazve chikamu cheRaibhurari uye inowedzera mafirita ane simba | IPhone nhau
Spotify inogadzirisazve chikamu cheLibhurari uye inowedzera mafirita ane simba
Ignacio Sala | 30/04/2021 12:00 | IPhone maapplication
Vakomana paSpotify, kure nekugadzirisa kuti ive inonyanya kufarirwa mimhanzi sevhisi yepasirese na 158 mamirioni, ivo vanoramba vachiwedzera mabasa matsva mushanduro yechishandiso chemafoni nhare uye itsva nyowani ichaburitswa munguva pfupi.
Iyi nyowani nyowani inotipa, seyakanyanya kutsva, gadziriso nyowani yeiyo Yako Raibhurari chikamu, yakafanana neiyo yatinogona kuwana pane iyo huru peji uye iyo yatinogona kuchinjanisa neyekuona runyorwa sepakutanga.
Chimwe chinhu chitsva chakabatanidzwa mune ino gadziriso, ndiwo ma mafirita ane simba izvo zvinotibvumidza isu kuyambuka kuburikidza nekuunganidza kwedu nenzira inokurumidza kuti tiwane zvirimo zvakarodha pasi, sarudzo nyowani dzekugadzirisa kugona kuwana izvo zvirimo nemazita, alfabheti kurongeka ... uye mukana wekumisikidza zvemukati kumusoro kuti ugare uine ruoko.
Chii chitsva mune nyowani Spotify yekuvandudza yeIOS
Zvitsva zvinoshandura mafirita kuti ikubatsire kufamba munzira yako yekuunganidza. Sarudza kubva kuarubhamu, muimbi, playlist, kana podcast kuti uone kuti ndeupi odhiyo wawakachengetedza uye kuenderana.
Zvirinani kusarudza sarudzo. Sarudza kuona odhiyo yako nearufabheti, nemitambo ichangoburwa, kana nezita remusiki. Ikozvino yakarongeka.
Kuwedzera kudzora uye nyore kuwana kune zvaunoteerera zvakanyanya. Sarudza anosvika mana ekurudyi, maalbamu, kana podcast inoratidza kuti uachengete akapihwa kuti uwane pakarepo. Iwe unongofanirwa kutsvedza munwe wako kurudyi pane izvi zvinhu kuti uone sarudzo ye "pini".
Shandisa iyo nyowani grid maonero kupatsanura zvemukati zvaunoda mune imwe nzira yekuona, iine makuru mavharo ealbum, playlists uye podcasts.
Kubva kuSpotify vanoti izvi zvitsva ichatanga kusvika kune vese vashandisi muvhiki inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Spotify inogadzirisazve chikamu cheLibhurari uye inowedzera mafirita ane simba
Ko kana Siri Remote nyowani ikaonekwa muApp yekutsvaga?